DEG-DEG: Barcelona Oo Si Rasmi Ah Ugu Dhawaaqday In Ay Xidig Reer Brazil Ah Kala Soo Wareegtay Kooxda Atlético Mineiro Iyo Waqtiga Uu Camp Nou Soo Gaadhayo. - Latest football news
DEG-DEG: Barcelona Oo Si Rasmi Ah Ugu Dhawaaqday In Ay Xidig Reer Brazil Ah Kala Soo Wareegtay Kooxda Atlético Mineiro Iyo Waqtiga Uu Camp Nou Soo Gaadhayo.
Kooxda Barcelona ayaa halkeeda ka sii waday in ay ka dhex muuqata suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee bisha January inta aanu caawa soo xidhmin waxayna hadda Barcelona si rasmi ah ugu dhawaaqday in ay heshiis shan sano ah la gaadhay difaaca reer Brazil iyo kooxda Atletico Mineiro ee Emerson Aparecida Leite de Souza Junior.
Barcelona oo dhawaan ku guulaysatay saxiixa Frenkie De Jong ayaa markale ku dhawaaqday in ay la soo saxiixatay Emerson kaas oo Camp Nou soo gaadhi doona isla maalinta uu De Jong Barcelona iman doono ee July 1,2019.
War saxaafadeed ay Barcelona ku shaacisay heshiiska Emerson ayaa lagu yidhi: “Kooxda kubabda cagta Barcelona iyo Atletico Mineiro waxay heshiis ka gaadheen la soo wareegista Emerson Aparecida Leite de Souza Junior. Xidiga reer Brazil waxaa si rasmi ah kooxda Catalnio loogu soo bandhigi doonaa July 1,2019”.
Barcelona ayaa shaacisay in ay Emerson ku soo heshay 12 milyan euros oo kaliya isla markaana uu saxiixay heshiis Camp Nou ku hayn doona ilaa xili ciyaareedka 2023/24 taas oo ah in uu shan sanadood qalinka ku duugay.
Waxaana qoraalka Barcelona lagu yidhi: “Lacagta waa 12 milyan yuro isla markaana waxa uu ciyaartoygu saxiixi doonaa shanta xili ciyaareed ee soo socda oo ah 2023/24”.
Magaca saxiixa cusub ee kooxda Barcelona oo dhamaystiran ayaa ah Emerson Aparecida Leite de Souza Junior, wuxuuna aad ugu xoogan yahay difaac ahaan iyo dhismaha weerar ahaan isaga oo dhashay January 14m1999 kii taas oo la micno ah in uu 20 sano jir yahay.
Emerson ayaa muddo sanad ka badan ka soo ciyaaray kooxda Belo Horizonte ka hor intii aanu ku soo biirin kooxda uu hadda ka tirsan yahay ee Atletico Mineiro wuxuuna difaacan midig ka soo ciyaaray heerarka kala duwan ee xulka da’yarta dalkiisa Brazil.
Emerson ayaa hadda ka tirsan xulkiisa Brazil ee ay da’doodu ka hoosayso 20 sano jirka ee dalka Chile ka socda wuxuuna hadda noqday ciyaartoy Barcelona ah kadib markii ay labada kooxood heshiis buuxa ka gaadheen. Miyuu noqon doonaa Dani Alves-ka cusub ee Barcelona?.